दुःखद खबर; घरवाट पढ्न निस्केकी १७ वर्षकी छोरीको एकैछिनमा मृ’त्युको खबर आयो, (भिडियो सहित) - News36media
September 22, 2020 September 22, 2020 News36mediaLeaveaComment on दुःखद खबर; घरवाट पढ्न निस्केकी १७ वर्षकी छोरीको एकैछिनमा मृ’त्युको खबर आयो, (भिडियो सहित)
काठमाडौ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा वडा नम्बर ११ मा एक १७ वर्षकी युवतीको रहस्यमय निधन भएको छ । पढ्न भनेर घरवाट निस्केकी युवती निधन भएको अवस्थामा फेला परेपछि परिवारका सदस्य निकै दुखी भएका छन् । पढ्नमा निकै तेज र भविष्यको राम्रो सपना देखेकी युवतीको रहस्यमय निधनले उनका छिमेकी र आफन्त पनि अचम्म परेका छन् । आमा भन्छिन्, मेरो लक्षिन नै लगिदियो, त्यस्तो नराम्रो बानी पनि थिएन ।
उनकी दिदीले पनि बहिनीको कुनै त्यस्तो सम्बन्ध र बानी नभएको बताउँछिन् । मैले संधै सम्झाउँथे मलाई कसैसंग केही गरेको छैन । म त पढेर भविष्यमा राम्रो मान्छे बन्ने हो भन्थि । आज यस्तो अवस्थामा देख्नुपर्दा अचम्म लागेको छ उनको दिदीले भनिन् । भखैरै एसईई पास गरेकी त्रिशला रसाइली जंगलमा मृत फेला परेकी हुन् । सालको रुखमा उनी फेला परेकी हुन् । कहिल्यै निरासावादी कुरा नगर्ने, पढाईमा निकै अब्बल किशोरी यस्तो अवस्थामा फेला परेपछि परिवारका सदस्यले उनको निधनलाई रहस्यमय भनेक छन् ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सोमवारवाट प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । अहिले सम्म उनको निधनको कारण खुल्न सकेको छैन । उनी कलेज पढ्ने तयारीमा थिइन् । एसईई पछिको खाली समयमा उनी कम्प्युटर सिक्ने काम गरेकी थिइन् । विहान १० वजे उनी कम्प्युटर सिक्न भन्दै निस्केकी थिइन् । उनी घरवाट निस्कने वित्तिकै एक जना ब्यक्तिसंग सेतो कारमा चढेको छिमेकीले देखेका थिए । त्यो गाडी कसको हो ? को संग कारमा गएको हो भन्ने उनको बुवालाई थाहा नभएको बताए ।
गाउँमा सामान छोड्न आउने पिकअप सेतो गाडीमा चढेको छिमेकीले देखेको आफुले थाहा पाएको बताएका छन् । विहान १० वजे कम्प्युटर पढ्न भनेर निस्केकी छोरी दिउसो ३ वजे शव देखियो भन्दै कसैले फोन गरेपछि आफुहरुले थाहा पाएको उनका बुवाले बताए । उनी आफ्नो मामा घरमा बसेर पढ्ने तयारीमा थिइन् । अब म कम्प्युटर सिकेर काठमाडौ मामा घर बसेर पढ्न जाने हो भन्ने योजनामा रहेको आमाले बताएकी छन् । ﻿
कोरोना संक्रमित क्याप्टेन लामाको भर्खरै आयो यस्तो खबर !
मोरङमा भयो सोच्नै नसकिने घटना : निगुरो टिप्न गएकी बलिकालाई….
August 28, 2020 August 28, 2020 News36media
September 4, 2020 September 4, 2020 News36media
यि हुन भोकभोकै हिंडेका पैदलयात्रीलाई बोलाउँदै खाना खुवाउँने सर्लाहीका मनकारी दम्पती
April 16, 2020 News36media